Ukraine oo qiratay in uusan cago badan ku taagnayn daafacooda Bariga Ukraine (Ciidamo go’doomay) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Ukraine oo qiratay in uusan cago badan ku taagnayn daafacooda Bariga Ukraine...
Ukraine oo qiratay in uusan cago badan ku taagnayn daafacooda Bariga Ukraine (Ciidamo go’doomay)
(Donbas) 22 Juun 2022 – Cutubyo ka tirsan Ciidamada Ukraine ayaa la kulmaya guuldarrooyin kale oo kaga yimid dagaalka ka soconaya bariga Ukraine ee ay wadaan Ciidamada Ruushku, gaar ahaan dhanka xarunta maamulka ee Severodonetsk ee bariga Ukraine.
“Cadowgu waxa uu isku dayayaa in uu si buuxda gacanta ugu dhigo magaalada Severodonetsk uuna go’doomiyo cutubyo ka tirsan ciidamada difaaca ee ku sugan tuulooyinka Borivske iyo Voronove, dagaalkuna wuu sii socdaa,” ayuu yiri Abaanduulka Guud ee Ciidamada Ukraine oo warbixin siinayey warbaahinta.
Borivske iyo Voronove waa laba tuulo oo ka tirsan Severodonetsk oo ku taalla daanta bari ee webiga Seversky Donets. Isla aaggaasi, Ruushku waxay qabsadeen tuulada Metyolkine dhamaadkii todobaad-dhamaadkii hore.
Sida laga soo xigtey warbixinta xaaladdan, Ciidamada Ruushka ayaa awoodooda weerar isugu gaynaya gobollada Donetsk iyo Luhansk – oo ka wada tirsan gobolka Donbass – gaar ahaan aagga u dhexeeya Severodonetsk iyo Bakhmut.
Isla aagga la dhisay, cutubyo Yukreeniyaan ah ayaa sidoo kale halis ugu jira inay ku go’doomaan koonfurta magaalada wayn ee Lysychansk, iyo magaalada Severodonetsk ee la mataansna ee dhacda dhinaca kale ee Donets, sida laga soo xigtay warbixino hore.
Previous articleMaxaa ka jira in wefdigii MW Xasan Sheekh ee Imaaraadka tegey la karantiilay?!!
Next articleMaxaa ka jira in MW Xasan Sheekh uu si qarsoodi ah ula kulmayo saraakiil Israeli ah?!!